मनोरंजन – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on दुनियाँको मनमा बसेको अभिनेता अक्षय कुमारलाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । बलिउडका खेलाडी कुमार अर्थात अक्षय कुमारलाई कोरोना संक्रमण भएको छ ।
उनी दुनियाँको मनमा बसेका अभिनेता हुन् । उनले ट्विट गर्दै यो जानकारी दिएका हुन् ।
जसकारण उनले अब कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । यस वर्ष कान्स फिल्म फेस्टिभलमा भारतलाई सम्मानित देशको रूपमा निमन्त्रणा गरिएको छ ।
त्यसैले अभिनेता कुमारले केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरसँगै भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको रुपमा महोत्सवमा सहभागी हुने बताइएको थियो ।
तपाईलाई बताउ, अक्षय दोस्रो पटक कोरोनाको चपेटामा आएका हुन् । यसअघि उनलाई कोरोनाको दोस्रो लहरमा पनि संक्रमण भएको थियो ।
उनले ट्विट गरेर भनेका छन्, ‘म कान्स २०२२ मा भारत प्याभिलियनमा हाम्रो सिनेमाको लागि धेरै उत्साहित थिएँ, तर दुःखको कुरा मेरो कोभिड परीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक आएको छ ।
त्यसैले अब म आराम गर्छु । अनुराग ठाकुर तपाईं र तपाईंको सम्पूर्ण टोलीलाई कान्सको लागि शुभकामना ।’
पल शाहलाई पर्खिरहेको फिल्मको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक (भिडियो)
No Comments on पल शाहलाई पर्खिरहेको फिल्मको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक (भिडियो)
अभिनेता पल शाहका कारण समयमै छायांकनमा जान नसकेको नेपाली फिल्म ‘सत्यम’ को शीर्ष गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक भएको छ । फिल्मका मुख्य अभिनेता मध्येका एक पल शाह एउटा प्रकरणमा मुछिएपछि यो फिल्म छायांकनमा जान सकेको छैन ।
निर्माता रेशम सापकोटाले पल शाहको घटनाको छानविन निष्कर्षमा नपुगेसम्म यो फिल्मको छायांकन प्रारम्भ गर्न कठिन रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बजारमा चलेको हल्ला जस्तो आफू फिल्म निर्माणबाट पछि नहटेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
राम्रो इन्टरटेनमेन्टको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गीतमा राजु महर्जनको स्वर, रेशम सापकोटाको लिरिक्स, कुटुम्ब ब्याण्डको म्युजिक, योगेश काजीको म्युजिक कन्सेप्ट छ । गीतको लिरिकल भिडियोलाई राकेश दाहालले सम्पादन गरेका हुन् । भिडियोमा अभिनेता राजेश हमालको संवाद पनि सुन्न सकिन्छ ।
भिडियोमा अभिनेता राजेश हमाललाई मात्रै फिचर्ड गरिएको छ ।
‘हामीले फिल्म घोषणा गरिसकेपछि दर्शकलाई यसबारे कुनैपनि कन्टेन्ट दिन सकेका छैनौं भन्ने महशुस भयो, सोहि कारण यसको शीर्ष गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक गरेका हौं, निर्माता सापकोटाले भने–‘फिल्मका चलचित्रका लागि दर्शकको पर्खाइ अरु थप बढ्ने पक्का भएपछि यो गीत सार्वजनिक गरेका हौं ।’
निर्माता सापकोटाका अनुसार फिल्मको प्रि–प्रोडक्सनको काम सकिएको छ । फिल्ममा पूर्व घोषितभन्दा केही सदस्य हेरफेर हुन पनि सक्ने निर्माता सापकोटाको भनाइ छ ।
यो फिल्ममा राजेश हमाल र पल शाहबाहेक अनुप विक्रम शाही, उपासना सिंह ठकुरी आदि कलाकारले पनि अभिनय गर्दैछन् ।
No Comments on समुन्द्री किनारमा नायिका आशकाको अनेक पोज ! हेराै १३ तस्बिर
भारतिय टिभि सिरियल नागिनबाट निकै चर्चामा आएकी आशका गोडरियाको तस्विर सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएको छ । उनको त्यो तस्विरमा धेरैले भद्दा कमेन्ट पनि गरेका छन् उक्त तस्विरमा आशा निकै बोल्ड अबतारमा देखा परेकी छिन् ।
उनि सिरियल नागिनमा अभिनय गरेपछि चर्चित बनेकी हुन् । उनको त्यो अभिनयलाई धेरै रुचाएका छन् । तर अहिले उनले समुन्द्र किनारमा उनले खिचेका तस्वीर व्यापक चर्चाको विषय बनेका छन् ।
उनले विवाह पछाडि पोल डान्स गरेर पनि चर्चा कमाएकी थिइन् । समुन्द्रको किनारमा लिइएका यी तस्वीरमा आशकाले माथिल्लो कुनै पनि बस्त्र लगाएकी छैनन। हालै मात्र सार्वजनिक उनका तस्विरले बलिउडमा सनसनि मच्चाएको छ ।
उनले करियरको यात्रा २००२ मा “अचानक ३७ साल बाद” नामक सिरियलबाट गरेकी थिइन । बेलाबेला उनले हट अबतारका तस्विर शेयर गरेर चर्चा बटुलेकी हुन्छिन् ।उनको बिहे ब्रेट गोबलेसँग भएको थियो ।
आमिरकी छोरी ‘इरा’को अ’र्धन’ग्न बर्थडे पार्टीः बलिउडमा त’रं’ग, तस्विरहरू भा’ईर’ल (तस्वीरहरू)
No Comments on आमिरकी छोरी ‘इरा’को अ’र्धन’ग्न बर्थडे पार्टीः बलिउडमा त’रं’ग, तस्विरहरू भा’ईर’ल (तस्वीरहरू)
No Comments on महानायक राजेश हमाल कति धनी छन् ? कति छ उनको सम्पति ?
No Comments on ज्योती मगरले ‘मान्छेको भन्दा त मुर्ती कै पोज दामी’… भन्दै यस्ता तस्बिर शेयर गरेपछि तहल्का
ज्योती मगर । नामै काफी छ । नेपाली कला क्षेत्रको चर्चित यो नाम विभिन्न तवरवाट बेला बेलामा चर्चामा आईरहन्छ ।कहिले प्रस्तुतीको कारण त कहिले केहि गित संगितले ज्योतीलाई सधैँ विवा-दमा राखिरह्यो ।
अरूले मज्जाले कपडा लगाएर प्रस्तुति दिँदा अहिलेसम्म सूर्य पश्चिमबाट उदाएको छैन, तपाईंलाई चाँही किन त्यो टाइपको कलाकार हुन मन लागेन ? सबैले एउटै हिसाबले काम गरेर पनि भएन नि ।
यसैक्रममा उनले नर्वे पुगेर प्रेमिल जोडीको नग्न मूर्तीसँग तस्बिर खिचाएकी छन् । उनले क्याप्सनमा लेखेकी छन् । मान्छेको पोज भन्दा त मुर्ती कै पोज दामी के नर्वे भन्ने देश तिर…..
उनका यी तस्बिरले अहिले सोसल मिडियामा तहल्का मच्चाएका छन् ।
No Comments on ओशो तपोवनमा ‘यौन’ फ्रि हो ? यसो भन्छन्- अभिनेत्री नम्रता र सोभिता (भिडियो)
No Comments on म तिमीसँग बस्दिनँ, मलाई डिभोर्स देऊ !
सरिता आचार्य ऊ आई। मेरो हात तानेर च्याप्प समाई। मेरो अनुहार रातो भयो। कान तातेर पूरै ज्वालामुखी निस्केलाजस्तो भयो। शरीरमा पूरै भूकम्प आयो।शरीर लगलग काप्न थाल्यो। विस्तारै कसले मेरो हात समात्यो भनेर हेर्न खोजें। तर मेरो टाउको उठ्दै उठेन।यतिकैमा टिफिन टाइम सकेको घण्टी बज्यो। म कक्षा कोठातिर लागें। कक्षा सुरू भयो। मलाई शिक्षकले के पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने केही थाहा भएन।
यसरी नै चार वटा कक्षा सकिएछ। म केमा डुबेँ, मलाई केही थाहा भएन। म कक्षा कोठाबाट बाहिर निस्कें। घरतिरको बाटो तताउन लागें।त्यही क्रममा ऊ फेरि मेरो सामुन्ने उभिई। यसरी कहाँ एक्लै हिँड्न पाइन्छ। म पनि आजदेखि तिमीसँगै हिँड्ने हो’, भन्दै अगाडि बढी।न त मैले उसलाई यसअघि देखेको थिएँ न त जानेको नै। यो एक्कासि के भइरहेको छ भन्ने लाग्यो। एकचोटि आफ्नो हातमा आफैंलाई चिमोटेँ र सपना हो कि भनी हेरेँ। सपना त होइन रहेछ। यदि सपना होइन भने किन ऊ मेरो पछि लागिराखेकी छे। ऊ यसअघि कहाँथिई रु अनेक प्रश्नहरू उठे मन भित्रभित्रै।
‘मेरो घर तिम्रो घरबाट दश मिनेट पर हो। मैले तिम्रो दाइ, दिदी, बुवा, आमा सबैलाई चिनेको छु। घर पनि देखेको छु। मैले तिमीलाई धेरै अगाडिदेखि नियालिरहेको थिएँ।’ ऊ मकै भुट्दा मकै पड्के जस्तैगरी भटट्ट्ट गरेजस्तो गरी बाटोभरि बोलिरही।म केबल चुप लागेर हिँडिरहेँ। त्यही क्रममा मेरो घर आयो।
मैले बाई भनेर घरतिर लागेँ। भोलिपल्ट सदाझैं ८ बज्यो। म ८ १० मा स्कुल निस्किन्थेँ। आज पनि म त्यही समयमा स्कुल निस्कें। घरबाट केही तल आएको त त्यो हिजोको केटी त्यही रहिछे। म न त घरतिर जाउँ न त स्कुलको बाटो जस्तो भयो।
‘सुन न म तिमीलाई २० मिनेटदेखि पर्खिराखेको छु। तिमी किन बोल्दैनौ रु’ भनी र फेरि हात समाई। मलाई हिजोको जस्तो कम्पन त भएन। तर मनमा एक किसिमको डर चाहिँ लागिराख्यो।अब उसले बोल्न सुरूगरी (‘तिमीलाई मैले तीन वर्षअघिदेखि हेरिरहेको थिएँ। तिम्रो हरेक क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेर्ने मौका मिलेको थियो। त्यसैले मलाई तिम्रो धेरै माया लाग्छ। तिमी साह्रै मनपर्छ र तिमीसँग क्लोज फ्रेण्डसीप गरौं जस्तो लाग्छ। तिमी किन कोहीसँग साथी बन्दैनौरु किन खुलेर बोल्दैनौरु’ यसरी अनेक प्रश्न सोधीरु म मुसुक्क हाँसें र ‘मेरो बानी नै यस्तै छ सानैदेखि’ भनें।
ऊ एक्कासि उफ्रिन थाली। म छक्क परेर एकटकले हेरिरहें।अनि उसले भनी (‘मेरो प्रयास सफल भयो। तिम्रो मुहारमा हाँसो देख्न चाहेकी थिएँ। आज देख्न पाएँ।’यस्तै यस्तै कुरा गरेर थाहा नै नपाई स्कुल आइपुगिएछ।स्कुलमा ठूलो कम्पाउण्ड ठूला(ठूला भवन करिब १५०० विद्यार्थी भएको ललितपुरको बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ९ मा हामी अध्ययन गर्थ्यौं। एउटै स्कुल, एउटै कक्षा भए पनि सेक्सन फरक फरक थियो। हाम्रो स्कुलमा कक्षा ९ मा ए देखी ई सेक्सनसम्म थियो। म सेक्सन ‘डि’मा थिएँ भने ऊ ‘ई’ मा थिई।
एउटै स्कुल एउटै कक्षा भए पनि मैले उसलाई कहिले पनि याद गरेको थिइनँ। यसरी हामी सँगै स्कुल जाने र आउने गर्न लागेको नि तीन महिना भएछ। यो तीन महिनामा म ऊसँग अलि अलि बोल्न थालेको थिएँ। यसरी हामी कक्षा ९ पास भएर दशमा पुग्यौं।दश कक्षामा उसले शिक्षकहरूलाई भनेर एउटै सेक्सनमा राखिदिन आग्रह गरिछ। त्यसपछि स्कुल आउने जाने समय बाहेक कक्षामा पनि सँगै भयौं।
यसै क्रममा ऊ धेरै बोल्थी। म एकदम कम बोल्ने, लजालु स्वभावको, कसैसँग नखुल्ने। एक दिन उसले ‘तिमी मलाई एकदमै मनपर्छ। धेरै वर्षदेखि तिमीलाई मैले नियालिरहेको छु।आज अकस्मात तिमीसामु आएर यो कुरा भन्ने हिम्मत बटुलेकी छु। प्लिज तिमी मलाई बुझ्ने प्रयास गर। आई रियल्ली लभ यू रोहित।’
एक्कासि उसको कुरा सुनेर मेरो मन र मस्तिष्कले काम गरेन। मलाई साह्रै गाह्रो भयो। न मैले उसलाई त्यो नजरले हेरेको थिएँ न केही सोचेको नै थिएँ। त्यसदिन म केही नबोली उसलाई छोडेर घर गएँ। मलाई रातभरि निन्द्रा लागेन।भोलिपल्ट कक्षामा पनि म केही बोलिनँ। ऊ मेरोसामु आएर हात समातेर आँसु निकालेर हेरिरही। त्यो कुराले मेरो मनमा कुनै असर गरेन। यसरी समय बित्दै थियो। म ऊसँग बोल्न र सँगै घर जान छोडिसकेको थिएँ।
यसरी समय बित्दै गयो। हामी एस।एल।सी। पास भयौं। ऊ राम्रो पढ्ने भएकोले मेजर इङ्लिस लिएर प्लस टु पढी। मैले मेजर इङ्लिस नपढ्ने निर्णय गरें र समाजशास्त्र पढें। प्लस टु पनि हामी एउटै कलेज पढ्थ्यौं। कलेज बंक गरेर कहिलेकाहीँ गोदावरी, कहिले त्रिभुवनपार्क जान्थ्यौं। यसै क्रममा उसले मलाई उसको आदत बनाइसकेकी थिई।
म कसैसँग खुल्न नसक्ने सोझो केटो अहिले नि उस्तै थिएँ। बस् उसको सामु चाहिँ अलिकति खुल्थें। हामी डेटिङ जाने क्रममा एकदिन उसले मलाई अँगालोमा बाधी र किस गरी। मलाई त्यो दिन लाज लागेको थियो।त्यस दिनपछि जति समय जहाँ गयौं, हामी अँगालोमा बाँधिएर मजाले खुलेर गफ गरेर बस्थ्यौं। मेरो खासै नजिकको साथी अरु कोही थिएनन्। यसै क्रममा प्लस टु पनि पास भयौं।
त्यो समयमा सबै साथीहरू घरतिरका दाइ दिदीहरू प्लस टु पास गररे अष्ट्रेलिया जाने फेसनजस्तै भएको थियो। हामी पनि त्यही समुदायका थियौं। लहैलहैमा लाग्ने समय थियो हाम्रो।मलाई खासै विदेश जाने भन्ने कुरा मनमा नै आउँदैन थियो तर मेरी उनी ९स्मिता० उसलाई भने साह्रै मन थियो। उसले जहिले हामी प्लस टु सकेपछि अष्ट्रेलिया जाने है भनेर फकाउँथी।
म जहिले पनि उसलाई नेपालमै बस्ने बरु केही बिजनेस गर्ने र परिवारसँगै बस्ने भन्थे। तर नारी हठ र राजहठको अगाडि कसको के लाग्छ र रुउसले आइइएलटिएस गरी, मलाई डिपेन्डेन्टमा राखेर। नभन्दै एकै पटकमा भिसा लाग्यो। उसले सिड्नीको एउटा युनिभर्सिटीमा अप्लाई गरेकी थिई।भिसा लागेको २० दिनमै कक्षा सुरू हुन्छ भन्ने भयो।
मैले घरमा कसैलाई भनेको थिएन, हामीले अष्ट्रेलिया ट्राई गरेका छौं भनेर। म उसलाई छोड्न सक्दिनथिएँ अनि ऊ मलाई। त्यसैले मलाई विदेशिने चाहना नहुँदानहुँदै पनि उसको करले, उसको मायाले उसको लगावले जान्छु भन्ने बनाएकी थिई। त्यसदिन घरमा आएर दाइसँग कुरा गरें।पारि गाउँको फलानोको छोरी मलाई असाध्यै मनपर्छ। स्कुल पढ्दा देखिको हाम्रो प्रेम थियो। अहिले उसले अष्ट्रेलिया ट्राई गरी मलाई डिपेन्डेन्टमा राखेर। भिसा पनि लाग्यो। के गर्ने होला रु भनेर डराई डराई सोधें।
दाइले धेरै बेरपछि कसको छोरी रे रु कहाँ को रे भनेर सोध्नु भयो। मैले सबै कुरा भनें। त्यसो भए म भोलि बुवासँग कुरा गर्छु भनेर हामी सुत्यौं। यसरी दाइ र मेरो बीचकोकुराले घरमा हङ्गामा भयो। म ब्राम्हण परिवारको छोरो ऊ नेवार समुदायकी छोरी फेरि वारि र पारि गाउँको भन्ने भयो। घरमा विवाद भयो।
दाइले मलाइ सार्‍है माया गर्ने भएकोले उहाँले नै घर परिवारलाई सम्झाउनु भयो। त्यसपछि हामी २ जना अष्ट्रेलिया जाने भयौं। पहिले त विवाह गरेर जाने भन्ने थियो तर पछि अहिले जाऊँ अनि २र३ वर्षपछि आएर हिन्दु परम्परा अनुसार बिहे गरूँला भन्ने कुरा भयो।हामी दुई अष्ट्रेलिया जाने भयौं। यही क्रममा हामी सपिङ गर्ने, आफन्तलाई भेट्ने जस्ता कामना हिँडी राख्थ्यौं। यी सबै काम सकेर अष्ट्रेलिया जाने दिन आयो।
हामी एक जोडी सपनाको संसारमा उड्यौं। घरबाट धेरै टाढा। म साह्रै सोझो, उनी अलि बढी नै चञ्चले र ट्यालेन्ट थिई। उसले कहाँ जाने कहाँ बस्ने सब कुरा मिलाइसकेकी थिई। उसका साथीहरू हामीलाई सिड्नी एयरपोर्टमा लिन आएका थिए।हामीलाई उनीहरू बस्ने ठाउँमा लगे। म नेपालमा हुँदा गोदावरी र त्रिभुवन पार्कबाहेक कहीँ नगएको। त्यसैले अष्ट्रेलियाको बाटो, एयरपोर्ट, घर, सपिङ मल, रमझम देखेर बाटोमा हेरिरहेको थिएँ।
उनीहरू साथी साथी भएकोले खुलेर गफ गर्दै थिए। म खासै कसैसँग पनि खुलेर बोल्न नसक्ने मलाई त्यहाँ गाह्रो भइरहेको थियो। तर अब के गर्नु यो त मलाई आदत पार्नु थियो। हामी उनीहरू बस्ने ठाउँमा पुग्यौं।त्यसपछि उनीहरूले हामीलाई फ्रेस हुन भने। उनीहरूको काममा जाने बेला भयो। उनीहरू एकछिन बसेर गएँ।मैले स्मितालाई भने (‘मलाई त गाह्रो भयो। तिमीहरू क्या खुलेर कुरा गर्छौ। म कसैसँग बोल्न सक्दिनँ। मलाई यहाँ बस्न गाह्रो हुन्छ जस्तो छ’ भने।
उसले मलाई अँगालोमा बाँधेर सम्झाई ‘त्यस्तो हुँदैन रोहित’ भनी। तिमी यति राम्रो छौ। यस्तो गोरो, गोलो मुहार, ठूला ठूला आँखा गुलावी कलरको ओठ, सुरिलो नाक मिलेको शरीर यस्तो राम्रो। हाइट पनि ५ फिट ८ इन्च भएका छौ। यस्तो राम्रो मान्छेले त्यस्तो भन्न हुन्छ ?
‘सुन त मलाई अघि साथीले के भनी थाहा छ रु’ ‘के भनी रु’‘तँ यस्तो काली मोटी छेस् तर कस्तो ह्यान्डसम केटा पट्याएको। म त झण्डै लडेको भन्दै थिई,’ ऊ मुसुक्क हाँसी र म पनि सँगै हाँसें।यतिकैमा माहोल बदलियो। हामी थाकेको हुनाले खाना बनाएर खाएर सुत्यौं। त्यहाँ पुगेको पर्सिपल्ट स्मिताको कलेज थियो।
उसको साथीहरू कामबाट कति बजे फर्के मलाई थाहा नै भएन। बिहान उठ्दा सोफामा सुतिराखेका रहेछन्। हामी उठ्यौ चिया पिउँदै वरिपरि नियालिरहेका थियौं। सानो सानो घर, हरियाली नि छ , सफा पनि छ, सुविधा सम्पन्न देखिन्थ्यो।लाग्थ्यो कि हामी स्वर्गमै आइपुग्यौं। व्यवस्थित बस्ती साह्रै रमाइलो थियो। तर पनि घरबाट एक दिन पनि कहीँकतै नगएकोले घरको याद आइरहेको थियो।
चिया खाइसकेपछि स्मिता खाना बनाउन थाली। त्यही क्रममा उसका साथीहरू नि उठे। ‘हाई रोहित, स्मिता’ भनेर कुरा सुरू गरे।
उनीहरू सहयोगी त छँदै थिए फ्रेन्डली पनि थिए। मलाई पनि हिजोको भन्दा अलि सजिलो महसुस भइरहेको थियो। उनीहरूले स्मितालाई तिमी भोलिदेखि कलेज जान्छौ नि भनेर सोधे रु स्मिताले खोइ के गर्ने हो भनी रु उनीहरूले आज कलेज देखाइदिन्छौ। अनि रोहितको लागि काम पनि खोजिदिएका छौं। त्यो ठाउँमा नि लगिदिन्छौं भने। हामी सबै जना खाना खाएर फ्रेस भयौं।
रेल स्टेसनबाट हामी टाउनहल जानको लागि रेल चढ्यौं। करिब १५र२० मिनेटमा टाउनहल पुग्यौं। हामी सबै त्यहाँ ओर्लियौं। अनि फेरि टाउनहलबाट अर्को रेल चढेर विन्यार्ड, मिल्सन्स पोयन्ट हुँदै सर्कुलर कि पुग्यौं। सायद चार वटा स्टेसन पार गरेर हामी त्यहाँ पुग्यौं।
ममात्रै एउटा नेपाली त्यहाँ काममा हुने हो कि जस्तो लाग्दै थियो। नभन्दै म एक जान मात्रै नेपाली त्यस क्याफेमा काम गर्ने रहेछु। यसरी कलेज र कामको लागि त ठाउँ नि देखियो। सरिता आचार्य सेतोपाटीबाट
तस्बिर हेर्न यहाँ क्लिक गराैँ
No Comments on चर्चित अभिनेत्री पोर्न भिडियोको सुटिङ गर्दै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेको घटनामा कति सत्यता ?
काठमाडौं । पोर्न भिडियोको सुटिङ गर्ने क्रममा एक चर्चित अभिनेत्री रंगेहात पक्राउ परेकी छिन् ।
आफ्नो रोचक फेसनका कारण चर्चामा रहने इन्टरनेट सेन्सेसन उर्फी जावेदको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
यो भिडियो हेरेर उर्फी जावेदका फ्यानहरु पनि छक्क परेका छन् । यस भिडियोमा प्रहरीले पोर्न फिल्मको सुटिङका ​​क्रममा ​​जावेदलाई रंगेहात समातेको हो । आज हामी त्यो भिडियोको पूरा सत्यता के हो भनेर जानकारी गराउन गइरहेका छौँ ।
यो भिडियो कन्टेन्ट क्रिएटर रोहित गुप्ताले फेब्रुअरीमा सेयर गरेका थिए । उर्फी अफिस पुगेर निर्देशकलाई भेटेको भिडियोमा देखाइएको छ ।
निर्देशकले उनलाई आफ्नो फिल्ममा राख्न चाहन्छन् । उनले उर्फीलाई आफ्नो प्रोजेक्ट (काम) गोप्य रहेको र रणवीर कपुरले चलचित्रमा खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् ।
यो सुनेर उर्फी जावेद उत्साहित हुन्छिन् । फिल्मको अभिनेताका लागि विदेशी कलाकारलाई लिइएको छ । चलचित्रमा बादशाहले संगीत दिने कुरा पनि बताइन्छ । फिल्मको नाम टाइटानिक हो ।
त्यसपछि रोहित गुप्ता दोस्रो निर्देशकको रूपमा अफिसमा आउँछन्, जो मुख्य अभिनेतासँग प्रवेश गर्छन् । उर्फीले मुख्य कलाकारको बारेमा सोध्दा उनी युगान्डाबाट आएको बताइएको छ ।
त्यसपछि निर्देशकले उर्फीलाई अडिसनका लागि बोलाउँछन् । उनलाई वियर्डबाट एक संवाद दिन्छन् । त्यसपछि प्रहरीको खाकी वर्दी लगाएका एक व्यक्ति अफिसमा प्रवेश गर्छन् र पोर्न फिल्मको सुटिङ गरेको आरोपमा सबैलाई समात्छन् ।
त्यहाँ उपस्थित तीनै जनाले उर्फीलाई दोष दिन थाल्छन् । यो सुनेर उर्फीलाई निकै रिस उठ्छ ।
त्यसपछि उनले आफ्नो म्यानेजर (प्रबन्धक) लाई बोलाइन् । आफ्ना लागि यस्तो अडिसन किन छनोट गरेको भनेर गाली पनि गरेकी छिन् । घटनापछि उर्फी स्तब्ध हुन्छिन् ।
त्यस बीचमा उनका प्रबन्धकले फोनमा यो सब एक ठट्टा (प्रयाङ्क) हो भनेर जानकारी गराउँछन् । ऊर्फीले आफूसँग यति ठूलो ठट्टा भएको भनेर पत्याउन सकिनन् । तर पछि उर्फी जावेद फेरि यो घटना सुनेर हाँसिन् ।
उर्फीको यो भिडियो निकै रमाइलो छ । ल भन्नुस तपाइलाइ यो ठट्टा भिडियो कस्तो लाग्यो ?